Suggest topics for Myanmar Digital Rights Forum 2019!
နောက်ဆုံးထား၍ ဖြည့်ရမည့် ရက် - ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈
မြန်မာဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ (MDRF) ကို ၁၈ ရက် နဲ့ ၁၉ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ မှာ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MDRFအဖွဲ့က ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဆွေးနွေးပွဲအတွက် အခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ တက်ရောက်မယ့်လူတွေကို ဆွေးနွေးပွဲက​နေ အကောင်းဆုံးတွေ ရသွားစေချင်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မျိုးတွေကို ဆွေးနွေးစေချင်တယ်ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်လာအောင် အကြံပြုပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
နောကျဆုံးထား၍ ဖွညျ့ရမညျ့ ရကျ - ၃၁ အောကျတိုဘာ ၂၀၁၈
မွနျမာဒဈဂဈြတယျအခှငျ့အရေးဆိုငျရာဆှေးနှေးပှဲ (MDRF) ကို ၁၈ ရကျ နဲ့ ၁၉ ရကျ ဇနျနဝါရီ ၂၀၁၉ မှာ ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ MDRFအဖှဲ့က ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဆှေးနှေးပှဲအတှကျ အခုကတညျးက ကွိုတငျပွငျဆငျနကွေပါပွီ။ တကျရောကျမယျ့လူတှကေို ဆှေးနှေးပှဲက​နေ အကောငျးဆုံးတှေ ရသှားစခေငျြတဲ့အတှကျ ဘယျလိုခေါငျးစဥျမြိုးတှကေို ဆှေးနှေးစခေငျြတယျဆိုတာကို သိခငျြပါတယျ။ ပိုကောငျးတဲ့ ဆှေးနှေးပှဲတှေ ဖွဈလာအောငျ အကွံပွုပေးဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
Deadline to submit: 31 October 2018
Myanmar Digital Rights Forum 2019 is going to be organised on 18-19 January 2019. MDRF organising team is already preparing for the next year forum. We want you to get the best out of the forum so we would like to hear from you what topics you would like to discuss!
Where are you from? (eg: Kalaw, Shan State) *
အောက်ပါတို့အနက် မည်သည့်အချက်များကို သင်လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။ အောကျပါတို့အနကျ မညျသညျ့အခကျြမြားကို သငျလှုပျရှားလုပျဆောငျနပေါသလဲ။ What is your background? (Please choose all that apply) *
HRD / CSO / NGO / INGO
Journalist / blogger / communicator / media worker
IT or digital professional
Government official (staff)
Political party member / political activist
မည်သည့် ကိစ္စရပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နေသလဲ?မညျသညျ့ ကိစ်စရပျတှကေို လုပျဆောငျနသေလဲ? What issues are you working on? *
ပြည်သူပါ​ဝင်ပူးပေါင်းမှု | ပွညျသူပါဝငျပူးပေါငျးမှု | Civic Participation
အင်တာနက်ရယူအသုံးပြုပိုင်ခွင့် | အငျတာနကျရယူအသုံးပွုပိုငျခှငျ့ | Access to the internet
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု | ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု | Transparency
ငြိမ်းချမ်းရေး & ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး | ငွိမျးခမျြးရေး & ပဋိပက်ခဖွရှေငျးရေး | Peace & Conflict Resolution
ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေး | ဒဈဂဈြတယျအခှငျ့အရေး | Digital rights
ကျား-မဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး LGBT အခွင့်အရေး | ကြား-မဆိုငျရာ အခှငျ့အရေး LGBT အခှငျ့အရေး | Gender and LGBT rights
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်/သတင်းအချက်အလက်/ မီဒီယာအခွင့်အရေး | လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့/သတငျးအခကျြအလကျ/ မီဒီယာအခှငျ့အရေး | Free expression / information / media freedom/ (I think we should split right to information separately )
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုအခွင့်အရေး | ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ လုံခွုံမှုအခှငျ့အရေး | Privacy rights
မည်သည့် ကိစ္စကို ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလိုပါသလဲ။ မညျသညျ့ ကိစ်စကို ဝငျရောကျဆှေးနှေးလိုပါသလဲ။ What issues would you be interested to participate? (Please choose all that apply) *
5G and the future of digital technologies
Algorithms, transparency, net neutrality, and manipulation
Controversial opinions / cyber-bullying / mental health / child safety / staying safe online (Cyber baykin etc)
Punishing digital activists / 66(d) / privacy law
Data / data management / data leaks / data crime / data storage / cloud services
Digital literacy / digital schools
Copyright / intellectual property / the right to share
Cyber security framework / addressing cyber crime
Countering violent extremism / hate speech
Digital advocacy / online protest / campaigns / hacktivism
E-government / Digital ID
Elections, democracy, and digital
Persons with disability and assistive technologies
Self-regulation: Facebook removals, deletions, and bans
Minorities and pluralism / language groups / sexual orientation / gender identify (SOGI, LGBT)
Surveillance / privacy / Social Media Monitoring Team
Universal Service Strategy (Fund)
Use of ICTs for agriculture, health, education, and other social goods
A culture of Digital Safety in Journalism
I want to hear expert opinions and news
I want skills training
I want to discuss in workshops
I want to leadadiscussion and propose new ideas
I want to hear from survivors of digital violations
ထည့်သွင်းလိုက်သော အချက်အလက်များအားလုံးကို ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့် စည်းကမ်းများအတိုင်း သိမ်းဆည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- တောင်းဆိုထားသော အချက်အလက်များသည် ဆွေးနွေးပွဲကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးပွဲ စီစဉ်သူအဖွဲ့မှ လွဲ၍ မည်သူ့ကိုမှ မျှဝေသွားမည် မဟုတ်ပါ။
ထညျ့သှငျးလိုကျသော အခကျြအလကျမြားအားလုံးကို ပုဂ်ဂိုလျဆိုငျရာ လှတျလပျခှငျ့ စညျးကမျးမြားအတိုငျး သိမျးဆညျးသှားမညျဖွဈပါသညျ။
- တောငျးဆိုထားသော အခကျြအလကျမြားသညျ ဆှေးနှေးပှဲကို ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျ လုပျဆောငျနိုငျရနျ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ဖွဈပါသညျ။
- အခကျြအလကျမြားကို ဆှေးနှေးပှဲ စီစဥျသူအဖှဲ့မှ လှဲ၍ မညျသူ့ကိုမှ မြှဝသှေားမညျ မဟုတျပါ။
All entered data will be kept according to strict privacy rules:
- All data requested is for the purposes of improving the Forum.
- Only the organising team will have access - we will not share with any other person or third party.
This form was created inside of Phandeeyar. Report Abuse - Terms of Service